Shiinaha Dog Interactive Doy Toys Spring Treat Dispenser Swing Quudinta Toy warshad iyo soo saarayaasha | Ihome
1.Bandhigyadan qaybiyaha daaweyntu waxay eeygaaga mashquulinayaan inuu ciyaaro kuna abaalmariyo daaweyn, taas oo soo dhacda markay ku ciyaaraan eeyga si ay u wareegaan. Labanlaab sida quudinta qunyar socodka ah waxayna dhiirrigelisaa jimicsiga iyo cunno caafimaad leh.
Naqshadeynta koobka nuugista ee awoodda leh, oo ku lifaaqan xabag adag (koollada waa la dhaqi karaa dibna loo isticmaali karaa), waxay nuugi kartaa boosas kala duwan mana fududa in la dhaco.
3.Dog daaweeyaha qalabka wax lagu iibiyo ayaa hoos u dhigi kara xawaaraha quudinta eeyga, ka fogoow in uu ku mergado cunista si dhakhso leh, iyo si wax ku ool ah u hagaajiyo sirdoonka xayawaanka iyaga oo baranaya helitaanka cuntada.
4.Crisp gambaleelka dhawaaqa ayaa ka dhigaya aaladdan mid aan loo adkaysan karin eeyga. Waxay awood u leedahay inay mashquuliso eyga kuna dhiirrigeliso eeyga inuu jimicsi badan sameeyo xitaa marka aan cuntada la siinin.
5.Gar dawanno iyo faynuusyada ku dawee kubbadda daweynta si ay u soo jiitaan dareenka xayawaanka, u suurto geliya xayawaanka inay yareeyaan waqtiga caajiska oo ay yareeyaan welwelka.
1.Ku buuxi toy-ka xujada eeyga dawooyin dhadhan fiican leh oo loogu talagalay saxaradaada.
2.Koobka nuugista ku riix meesha aad rabto inaad ku ciyaarto.
3. Riix kiliyaha kabaarka si aad ciyaarta ugu hagaajiso meelkeeda.
4.Daaw eygaaga waqtiga noloshiisa!
5.Ku hagaaji sanduuqa cuntada si aad u bedesho dhibaatada ciyaarta xujada eeyga sida iyo marka loo baahdo.
Waxyaabaha: Caag Abs + Guga Ahama + Saldhig nuugid + Dawan yar
Cabir: 29cm * 9cm
Hore: Eyga Frisbee Flying Disc Butter Interactive Toy Training Flyer
Xiga: Butros Snuffle Mat Dog xujo Caruurta Alaabta Kaabash Gaabis ah
Eey Snuffle Mat Ey Sniffin ...
Diyaarado Disc Flyer Dog Frisb ...
Butros Snuffle Mat Dog xujo ...
DogcToy Oxford Fabric Cunto ...
Ball Dog Dog Dog Dog Si ...